Imigaqo | Mytrickstips
ikhaya // Imibandela
IINKONZO ZENKONZO - I-TOS
Kucelwa ufunde 'Imigaqo yeNkonzo' ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa iwebsite yethu. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa i-website yethu, usinika imvume yakho yokwabela kunye nokusebenzisa ulwazi olufakwe kwisayithi lethu kuwe. Ngokwemiqathango yenkonzo yethu, unjalo 'ukuvuma' kwaye 'kwamkela ' kule mimiselo ngokusebenzisa i-website yethu nayiphi na indlela.
I-website yethu inokudibanisa ezininzi kwiindawo zesithathu. Asihambelani ngqo naluphi na lewebhu. Ukongezelela, zonke izinto kunye neempawu ezinxulumene nazo NOT ephethe kunye nokulawulwa nguwe. Ubunini kunye nokulawulwa kwepropati yengqondo kunye nabanikazi abachaphazelekayo. Asinakuthatha uxanduva malunga nabo.
Akukho nxalenye yewebhusayithi yethu ekujoliswe kuyo ukunikela nayiphi na iinqununu okanye iziqinisekiso. Asiyi kuba noxanduva lwakho nawuphi na umonakalo kuwe okanye ishishini lakho ngenxa yokutyelela okanye ukusebenzisa isayithi lethu nayiphi na injongo. Singaqinisekisi nantoni na echazwe okanye echazwe ngolwazi kunye neenkonzo esizibonelayo kwiziko lethu.
Sigcina ilungelo lokulungisa nayiphi na into engaqinisekanga kwimixholo kwiwebsite yethu ngaphandle kokunika isaziso esandulelayo. Asisoloko siqinisekisa ukuba iimpazamo ziya kulungiswa ngokukhawuleza. Ukongezelela, asithembisi ukuba i-website yethu iya kufumaneka ngamaxesha onke. Ulwazi olukwindawo yethu akuyona incwadi yokulawula kwaye akufanele kubhekwe njengemali esemthethweni, yemali okanye yonyango. Umxholo oshicilelweyo ngowenjongo yolwazi kuphela kwaye akungena endaweni yokubonisana noqeqesho.
Usebenzisa i-website yethu kwingozi yakho. Asinabangela nayiphi na imiphumo enokuvela ngaphandle okanye malunga nokusetyenziswa kweenkonzo zethu okanye iwebhusayithi kwiyiphi na indlela okanye ngendlela. I-onus yi-100% yakho nangona isayithi lethu liye lacetyiswa ngokucacileyo malunga nokulahleka okukhoyo. Uyavuma NOT ukusibambalela ukuba sinokuziphendulela nayiphi na ilahleko, umonakalo okanye amatyala phantsi kweyiphi na imeko, nokuba ingaqondiswanga ngqo, ingangqali, okanye ilandelwe.
Nangona yonke inzame ithathwa ukuba kuqinisekiswe ukuba ulwazi kwiwebhusayithi yethu lichanekile, asiqinisekisi ukuba lichanekile okanye liphelele. Akukho nto kwi-website ye-website ayiyi; (a) Misela okanye ungabandakanyi lakho okanye uxanduva lwethu lokulimala okanye ukufa ngenxa yokungabi nantoni. (b) Misela okanye ungabandakanyi lakho okanye uxanduva lwethu lobuqhetseba naluphi na uhlobo. (c) Misela okanye ungabandakanyi lakho okanye uxanduva lwethu nantoni na engavunyelwe ngumthetho. (d) Nciphisa okanye ungabandakanyi lakho okanye uxanduva lwethu olungenakukhutshwa ngaphandle komthetho osebenzayo.
Sinika iinkonzo zethu kuphela ngesiNgesi. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuba Imiqathango yeNkonzo esetyenziswe kuthi siqiqa. Ukuba awuvumelani, uyacetyiswa ukuba ungasebenzisi iwebsite yethu. Ngaphandle kweemeko, kufuneka uqhubeke usebenzisa isayithi lethu ukuba awuvumelani nayo yonke imiqathango yenkonzo echazwe ngathi.
Njengeziko elizimeleyo kunye neli-limited responsibility, sinelungelo lokukhusela nokunciphisa amatyala ethu. Ngoko, khumbula ukuba usebenzisa njani iwebhusayithi yethu. Njengemeko yokusetyenziswa, uyavuma ukuba awuyi kuzisa naziphi na izimangalo kwiwebsite yethu okanye abasebenzi bethu nayiphi na imbopheleleko okanye umonakalo onokuthi usikhathalele malunga nokusetyenziswa kwewebsite yethu. Ngaphandle kwemigca efanayo, uyavuma ukuba iMigomo yeNkonzo yolwazi olwaneleyo ezandleni zakho ukuba yamkele ukuba i-website yethu yokukhushulwa kwemali iya kusikhusela thina kunye nabasebenzi bethu nxamnye nawa mabango afakwe kuthi.
Ukuba nayiphi na inxalenye ye-disclaimer yewebhusayithi ayihambisani nomthetho osebenzayo, ayiyi kuchaphazela ukunyanzeliswa kwamanye imigangatho yenkonzo echazwe kweli phepha. Ukongezelela, siyalahla zonke iimfanelo ezibangelwa nakweyiphi na indawo esithathu echaphazelekayo nantoni na. Sisebenza njengomntu ophakathi-mali ukubonelela iikhowudi zamahhala kwiindwendwe. Asihambelani ngokuthe ngqo okanye sidibene nayo nayiphi na impahla yezinto ezizimeleyo kwiziko lesithathu.
Iinkonzo zethu zamahhala / iinkcukacha zinikwa "NJENGOBA" ngaphandle kwewaranti okanye izikhonkwane ezixhomekeke kuyo. Ngoko, asiqinisekisi ukuba isisombululo esinikwe kuthi siya kusebenza ngaso sonke ixesha. Sihlose ukukunika iikhowudi zesipho samahhala, kodwa asikwazi ukuthembisa ukuba ikhowudi iya kusebenza i-100% yamaxesha. Kwakhona, kufuneka uvumele ukugqiba amanyathelo afanelekileyo ukuze uvule ikhowudi, enokufuna ukuba ugqibezele uphando kwiimeko ezininzi. Eyona nto ifanelekileyo yamakhono ethu, sizama ukunikela ngeengxowa-mali "ngaphandle kweendleko", kodwa lizwe elithile. Ngoko ke, nayiphi na indleko ehambelana noshenyu ayifuni phantsi kwegunya lethu.
Sinalo igunya lokwenza utshintsho kwi "Imigomo yeNkonzo" nanini na ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Uxanduva lomsebenzisi ukuqhubeka neenguqu ezikhoyo. Umsebenzisi uya kufumana imigangatho ehlaziyiweyo kunye neemeko kule khasi elifanayo. Ukuba unemibuzo eminye malunga nemigomo yesevisi kwiwebhusayithi yethu, uzive ukhululekile ukudibana nathi.